Kiisas cudurka jadeecada oo laga helay xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinka Bossaso & Garowe. – Radio Daljir
Kiisas cudurka jadeecada oo laga helay xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinka Bossaso & Garowe.
Garowe, Apr 20 – Sida uu cadeeyey agaasimaha wasaarada caafimaadka ee Puntland, kiisas cudurka jadeecada ayaa lagu arkay xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo haajiray dagaalada aafeeyey gobollada koonfureed ee Somaliya.
Agaasimaha wasaarada, Dr. C/risaaq Xirsi Xasan oo u waramay idaacada Daljir ayaa sheegay in wasaaradu ay samaysay hawl-wadeeno ka tirsan wasaarada oo ka bilaabay labada magaalo mashruuc dabiid ee dhallaanka u nugul ama uu saameeyey cudurka jadeecadu.
Dr. C/risaaq waxaa uu sheegay in inta la og yahay 3 qof ay u dhinteen cudurka jadeecada Garowe & Bossaaso-ba, kiisaska la geeyey cisbitaaladuna ay yar yihiin, balse sida uu xusay ay jirto baqdin ay ka qabaan in dhallaanka aan la talaalin ee guryaha lagu hayaa ay khatar u yihiin in uu ku dhaco cudurka jadeecadu.
Agaasimuhu waxaa uu sheegay in jadeecadu ay ka mid tahay cudurada faafa ee sida sahlan carruurtu isugu gudbin karaan, gaar ahaan malcaamadaha, iskuulaadka, xarumaha daryeelka dhallaanka, iyo fadhiyada kale ee dadku isugu yimaadaan.
Dr. C/rsiaaq waxaa uu xusay in xilliga abaarta ee lagu jiro dartii, iyo nafaqa darrida haysata dadka danyarta ahi ay keeno in ay dhallaanku u nuglaadaan qaadista iyo faafka guud ee cudurada uu ka mid ah yahay jadeecadu.
Waxaa uu ku dhiirigeliyey waalidiintu in ay joogteeyaan talaalka dhallaanka, haddii ay arkaan astaamaha cudurka jadeecadana ay si dhakhsa ah ula xiriiraan cisbitaalada iyo fadhiyada caafimaadka.
Dr. C/risaaq waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan cuduro kale oo leh astaamaha cudurka jadeecada sida xummad, firiiric jidhka ka soo daata iwm.